मुलुकले निकास पाएपछि हामीले पनि निकास पाउने बिश्वासका साथ चुप लागेर बसेका हौ | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता मुलुकले निकास पाएपछि हामीले पनि निकास पाउने बिश्वासका साथ चुप लागेर बसेका हौ
अध्यक्ष नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघ
अर्जुन रानाभाट नेपालका ट्रक ब्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बुटवलमा रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात ब्यवसायी संघको नेतृत्व हुदै महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका रानाभाट केही महिना अघि काठमाण्डौमा सम्पन्न अधिवेसन बाट दोश्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । लामो समयदेखि ट्रक ब्यवसायमा सम्लग्न रानाभाटलाई चिन्नेहरु सान्त स्वभाव र कसैलाई नबिझाउने ब्यवसायीको रुपमा परिभाषीत गर्छन । पटक पटकका आन्दोलनमा ट्रक जलाउदा पनि ब्यवसायीहरुले क्षतीपुर्ति नपाएको भन्दै आक्रोसीत रानाभाट पछिल्लो आन्दोलनमा पनि ट्रकहरु माथी आगजनी भएपछि सवै सवारी साधनको साचो राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिनु भएको छ । प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा रहेर रानाभाट संग भगवती पाण्डेले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा धेरै सवारी साधनहरु क्षती भएका छन यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनु भएको छ ?
नेपाल बिचित्रको छ आन्दोलन एउटा बिषयमा हुन्छ तारो अर्को पक्षलाई बनाईन्छ । क्षती सरोकार नै नभएकाहरुले ब्यहोनु पर्छ । वास्तवमा मालसामानकोे ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन भनेको ट्रकहरु मात्रै हो अहिलेको परिस्थीतीमा मात्र होईन जुनसुकै बेलापनि सामान आपुर्तिको लागी प्रयोग हुने ट्रकहरु माथी आक्रमण हुने गरेका छन । जुन सुकेै आन्दोलका बेला पनि सरकारले हामी सुरक्षा दिन्छौ तपाईहरु ट्रक चलाउनुहोस भनेर अनुरोध गरेको हुन्छ । यस पटकपनि सरकारको आग्रहमा सवारीका साधनहरु सञ्चालन गरेका छौं । तर स्कटीङ भएको भएता पनि ठाउठाउमा ट्रकहरु तोडफोड भएका छन,जली रहेका छन । राज्यले सुरक्षा दिन्छु भनेको भएता पनी सुरक्षा दिन नसक्नु दुखद पक्ष हो ।
तोडफोड र आगजनीमा परेका सवारी साधनको क्षतीपुर्ती ब्यवसायीले कसरी पाउछन ?
बिगतमा कपिलबस्तुको चन्द्रौटामा त्यत्रो दुर्घटना भयो, सय भन्दा बढी सवारी साधन ध्वस्त भए तर सवारी धनीहरुले मात्र २५ हजारमा चित्त बुझाउनु पर्यो । सरकारले जुन सुकेै बेला पनि क्ष्तीपुर्तीको आश्वासन दिने गरेको छ तर क्षती भैसके पछि पाईदैन । अहिले पनी बिभिन्न स्थानमा गरी ६ वटा सवारी साधन जलेका छन भने एकजना चालकको हत्या भएको छ । राज्यको यस्तो स्थीती हो भने हामीले हाम्रा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बिषयमा अप्रिय निणर्य लिनु पर्ने बाध्यता श्रृजना भएको छ । स्कटीङ गर्ने तर सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने हामी सवारी सञ्चालन गर्न सक्दैनौ सुरक्षाको पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । क्षतीपुर्तीको पनी ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा महासंघले कसरी समन्वय गर्दैछ ?
देशभरीका ट्रक ब्यवसायी संस्थाहरुको संस्थागत नेतृत्व नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघले गरेको छ । महासंघमा आवद्ध स्थानीय संस्थाहरुले ब्यवसायीमा परेका पिरमर्का र समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गर्दै आएका छन भने ति संस्थाहरुको मनिटरीङ र राज्यसंग गर्ने नितीगत छलफल महासंघले गर्ने गर्छ ।
घटना वा दुर्घटनाका पिडित पक्षले क्षतीपुर्ती पाउन ढिलाई हुने गरेका गुनासा छन के भन्नु हुन्छ यहाले ?
दुर्घटना बास्तवमा आफैमा दुखद हुन्छ । दुर्घटना पश्चात राहत रकम हस्तान्तरणमा ढिलाई हुनु भनेको बिमा कम्पनीहरुको लापर्वाही हो । यसका अलवा अर्को कारण केहो भने सरकारले तोकेको वा बिमा रकम भन्दा बढी मागदावी गर्ने र त्यसलाई राजनीतीक दलहरुले सहयोग गर्ने गरेका कारण थप १५।२० दिन समस्या अल्झिने गरेको छ । अन्यथा घटना घटेको ४५ दिन भित्र बिमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बिमा कम्पनीहरु संग सहमती छ । त्यो रकम सिधै बिमा कम्पनीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मृतकका परिवारले पाउने हो तसर्थ ब्यवसायीले अल्झाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर कुनै पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो दायित्व लिन चाहनु हुन्न । हामी संघ संस्था र महासंघले पहल गरेर यथासक्य छिटो भुक्तानी दिने प्रयत्न गरी रहेक छौ र दिईरहेका पनि छौं ।
क्षतिपुर्तिको सन्र्दभमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रयाप्त दवाव श्रृजना गर्न नसक्नु भएको हो या सर्वसाधरणलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
त्यसो होईन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बुझ्नु हुन्न भन्ने कुरा रहदैन बिमा नितीमै प्रष्ट उल्लेख छ । बिमा नितीमा उल्लेख भएको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई थाह छैन भन्ने कुरा मान्न सकिन्न तर कतिपय घटना र क्षतिपुर्ति दिने बेला उहाहरुले थाह नपाए जस्तो गर्नु हुन्छ त्यो गलत हो । तर सर्वसाधरणलाई कतिपय कुरा थाह नहुन सक्छ हामीले सर्वसाधरणलाई पनी यसबारे बुझाउनु पर्छ भनेर लागेका छौं । राज्यले केही पनी गर्दैन । कानुनमा भएको कुरा ब्याख्या गर्ने काम प्रहरी प्रशासनबाट हुदै आएको छ । प्रहरीले हरेक घटनामा तपाईहरु मिलेर आउनुस भनेर पठाउछ । त्यस कारण प्रहरी प्रशासन सक्रियता अलि कमजोर देखिएका कारण सर्वसाधारणले दुख पाईरहका छन ।
यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट कहिले हटछ ?
गजवको कुरा उठाउनु भयो । सिण्डकेट केलाई भन्ने ? यसको ब्याख्या कसले गरेको हो ? यातायात सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया केहो ? राज्यले हामीलाई निर्देश गर्नु पर्यो हामी त्यसमा तयार छौं । हामी सिण्डीकेटको पक्षधर होईनौ । हामी सिण्डीकेट कायम गर्नपनि चाहन्नौं । आफुखुसी मुल्य निर्धारण गर्ने र अर्काको अधिकार हनन गर्ने कामलाई मात्र सिण्डीकेट भनिन्छ । सिण्डीकेट कहा छ भने उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा छ । डिलरसिप भनेको केहो सिण्डीकेट होईन ? हाम्रा गाडी एकै चोटी ५० वटा लोड हुन सक्दैनन एक पछि अर्को पालै संग लोड गर्नु पर्छ । त्यसरी पालो लगाएकोलाई सिण्डीकेट भनेर आरोप लगाईएको मात्र हो ।
ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यको कानुन हातमा लिएको आरोप छ नी ?
हामीले कानुन हातमा लिएका होईनौ देशभरी यातायात ब्यवसायीहरुले राखेका तौल पुलहरु छन र तौलपुल कार्यबिधी बनेको छ । तौलपुल कार्यबिधीमा यातायात ब्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात ब्यवस्था कार्यालयले त्यो तौल पुल सञ्चालन गर्ने र मुलकको कानुनमा भएको सडकको भारवहन क्षमता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था भए अनुसार तौलपुल सञ्चालनमा छन । राज्य निरिह छ । न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्छ न यातायात ब्यवस्था कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्छ । हाम्रो पेसा नै धरापमा पर्ने भएका कारणले हामी अलि सक्रिय भएका मात्र हौं कानुन हातमा लिएका होईनौं । तौलपुल कार्यबिधी भन्दा हामी अलिकती पनी बाहिर गएका छैनौं ।
यहाहरुले भाडा कम छ हामी मर्कामा छौ भनेर पटक पटक भाडादर बढाउन दवाव दिनु भएको छ त र ब्यवसायीहरुले चलाउन पाए चलेको भन्दा कम भाडामा पनि चलाउछौ भन्छनी त ?
त्यो कुरा उद्योगी ब्यवसायीको मात्र हो यातायात ब्यवसायीहरुको होईन आफुलाइ मर्का पर्ने गरी कसैले गाडी चलाउदैन । नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानको भाडादर निर्धारण गरेको छ तर उद्योगी ब्यवसायीहरु त्यो दिन तयार हुनुहुन्न । कम गरेको पैसा उद्योगी ब्यवसायीलाई फाईदा हुन्छ । सरकारले कायम गरेको भाडाका आधारमा बस्तुको मुल्य कायम भएको हुन्छ तर सस्तो मुल्यमा बोकेको भनेर ब्यवसायीले बस्तुको मुल्य घटाउदैनन । कम मुल्यमा ढुवानी गरेर ट्रक ब्यवसायीलाई शोषण गर्ने मात्र सोच भएकाहरुले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन यसमा कुनै सत्यता छैन । यदी कुनै ब्यवसायीले सस्तोमा माल बोक्छु भन्छ भने उसलाई छुट छ, हामी कसैका गाडी पनि नियन्त्रण गर्दैनौ । हामी तिनै ब्यवसायीका प्रतिनिधी भएको नाताले हामी उहाहरुलाई सरकारले तोकेको भाडा बारे जानकारी दिन्छौं सजग र सचेत बनाउछौं । कसैले पनि हामीले स्वतन्त्र रुपले ब्यवसाय गर्न पाएनौ भनेर गुनासो आएको मलाई जानकारी छैनौ । हामी ब्यवसायीका प्रतिनिधी भएको हुनाले उहाहरुको अधिकार कुण्ठीत गर्ने काम हुदैन उहाहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने काम हुन्छ । केवल उद्योगी ब्यवसायीहरुले अनाबश्यक आरोप लगएर हाईलाईट गर्नु भएको मात्र हो ।
यातायात ब्यवसायीहरुका समस्याहरु के के हुन तिनको समाधानमा महासंघको के भुमिका छ ?
हार्डवेयर पसलमा १ हजार ७५ आईटम सामान हुन्छ रे । हाम्रा समस्या त्यती नै छन । तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था हुदा हुदै पनी राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुलकको परिस्थीत जटिल छ हामी यथासक्य संबिधान निर्माण होस त्यस पछि बसेर छलफल गरौला भनेर हामी चुपलागेका छौं । यस्तो परिस्थीतीमा राज्यले केही गरेन भनेर दोष दिन उचित देख्दीन । सवै नेताहरु संबिधान निर्माणमा लाग्नु भएकोले हाम्रा माग तेस्र्याएर अल्मल्याउनु राम्रो पनि होईन । तर संबिधान निर्माण पछि पनी यातायात क्षेत्रलाई हिजोको जस्तै तरिकाले सञ्चालन गर्न खोजियो भने दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ । खर्वौं रुपैया लगानी भएको यातायात क्षेत्रलाई हेर्न राज्यको निकाय छैन । हामीले पटक पटक यातायात क्षेत्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको माग गरेका छौं । तर भौतीक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भनेर एकैठाउ गाभीएको छ । जव सम्म यातायात मन्त्रालयको ब्यवस्था हुन्न तव सम्म यातायात ब्यवसायीका समस्या पुर्ण रुपले संवोधन हुन सक्छन भन्ने लाग्दैन तसर्थ यातायात मन्त्रालय बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । मुलकले निकास नपाए सम्म हामीले निकास पाउन सक्दैनौ भन्ने बुझेर हामी नवोलेका हौ आशा छ मुलकले निकास पाउना साथ यातायात क्षेत्रले पनि निकास पाउने छ ।